Abaculi abahlukene bazohambela owaseGingindlovu | News24
Abaculi abahlukene bazohambela owaseGingindlovu
GINGINDLOVU Music Festival umcimbi ozobanjelwa esifundeni saseNorth Coast. Kulo mcimbi kuzobe kukhona abomculo wokholo, umaskandi, hip hop, ne-house kanye noDj abehlukene.
Lo mcimbi uhlelelwe ukugubha ukwahlukana kwamasiko atholakala ngaphansi kwesifunda iLembe. Ngosuku lo mcimbi kuzoba nobukhuphekhuphe obuningi bezingane ezincane kanye nemindeni.
Lo mcimbi uzobanjelwa olwandle lwaseDokodweni, eMandeni, ngomhlaka 31 kuMfumfu (October) 2015. Umcimbi uzoqala ngo-12 emini kanti amathikithi atholakala ngo-R100 ajwayelekile bese kuthi awezicukuthwane abize u-R200 eComputickets.
Abaculi abazohambela lo mcimbi kubalwa kubona i-Big Nuz, uZakwe, uOskido, uKwesta, Dbnites, uThina Zungu, uFikile Mlomo, uKhuzani, uMfiliseni Magubane, Abafana Bakamgqumeni kanye nabanye futhi. Kunxuswa umphakathi ukuthi usheshe uwathenge amathikithi kusenesikhathi.